Warhammer Odyssey waa iskuul MMORPG duug ah oo loogu talagalay Android | Androidsis
Warhammer Odyssey waa 'dugsi jir ah' MMORPG oo aan lahayn dagaal toos ah oo muuqaal muuqaal ah
Warhammer odyssey eHoreba waa loo heley gobol ahaan waxaan dhihi karnaa waa "iskuul duug ah" MMORPG taas oo aysan jirin dagaal toos ah iyo mushahar lagu guuleysto ama la mid ah. Si kale haddii loo dhigo, sida Dunida Dagaal ee la wareegtay carshigii MMO sannado ka hor.
Xilli markii dhammaan kuwa MMO ee suuqa ku dhacay waa dagaal toos ah oo wata hawlgallo otomatig ah taas oo aan waqti badan ku bixinno gudbinta shineemooyinka, Virtual Realms ayaa u ciyaareysa si ay noo siiso dhadhankii hore markii aan dilnay kumanaan ka mid ah 'mobs' ama NPCs (Non Player Controlled) si aan kor ugu qaadno sidaasna ku helno kan ugu fiican uguna adduunka ku xoog badan. Aan ku gaadhno layaabkan wanaagsan.
1 Dugsi duug ah MMORPG
2 Adduun Joogto ah oo ku yaal Warhammer Odyssey
3 Baadh Adduunyada Hore ee Warhammer Odyssey
Dugsi duug ah MMORPG
Kuwa aan sameyn soo martay Runescape (In kasta oo ay tahay MMORPG, ma laha sawiradaas cajiibka ah), iyo waxay rabaan inay dareemaan waxa uu yahay iskuul hore MMORPG, Warhammer Odyssey ayaa ah tan ugufiican waxyaalaha hada la heli karo. Runta in xitaa isagu yahay Warhammer xitaa wuxuu siiyaa awood gaar ah.
Si waxaan ula jeednaa iskuulkii hore waxaa loogu talagalay wax aad u fudud in la sharaxo: halkan waxaad ku xakameyneysaa suufiyadaada dagaalyahan adoo adeegsanaya ul xakameyn ah iyo naftaada waa inaad gujisaa dagaalka gacanta ama awoodahaas aan nafteena ugu xilsaari karno kantaroolka shaashadda.
Dugsi hore MMORPG iyo maxaa gaadho heer aad u sarreeya oo heer sare ah oo muuqaal ahaan farsamo ahaan ah. Waqtiga aan ciyaareynay ma aanan dareemin wax dib u dhac ah muuqaal ahaanna waa mid heer sare ah. Xitaa waxaa nagu hareereeyay ciyaartoy sameynaya howlahoodii oo dilay NPCs.
Adduun Joogto ah oo ku yaal Warhammer Odyssey
Waana taas Warhammer Odyssey yimaado si aad uhesho meel aad u faaruq ah oo ah nooca MMORPGs; in kastoo la yiraahdo runta Genshin Impact Way ku habboonaan lahayd, laakiin way ka sii socotaa tan joogtada ah waxayna leedahay uun wax wada shaqeyn ah. Halkan Oddisey waxaan ku dareemeynaa inaan ka mid nahay bulshada ciyaartoy khariidado aan kula kulmeyno ciyaartoy halkan ilaa halkan ah.
Sheeg intaas xitaa khariidaduhu way ballaaran yihiin oo waxoogaa xamuul ah ayaa na soo maray intii aan ka gudubnay heerarka oo aan waxoogaa ka ogaanay kulankaan khadka tooska ah looga yaqaan Warhammer Odyssey. Isku soo wada duuboo waxaan haynaa taxane ah 6 fasal iyo 12 takhasus. Xaaladayada waxaan dooranay dagaalyahan Monk ah oo abuuraya auras awood leh si xitaa asxaabtiisa ay u isticmaali karaan.
Real Virtual ayaa hilibka oo dhan ku tufay candhuufta si ay si gaar ah u xuso ganacsiga, sidaa darteed waxaan fahamsanahay in qaar ka mid ah farsamada gacanta iyo "farsamada" waxay noqon doonaan cunsur muhiim ah si aan sanduuqeena u naaxino oo aan aadno dhanka bangiga ee magaalada magaaladu leedahay ugana tagno lacagtayada.
Haddii aan halkaan ka hadalno waa wax gacanta lagu wada haysto, maxaa Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda xirfadda iyo dhibcaha hagaajinta dabeecadda in aan ku dari karno. Dabcan, kuwa aan rabin inay wax badan cunaan madaxa, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad si otomaatig ah ugu xilsaarto fasalka la xushay.
Baadh Adduunyada Hore ee Warhammer Odyssey
Haddaan ka horreyno adduun dheer oo joogto ah oo aan kula ciyaareyno kuwa kaleTan macnaheedu waxa weeye inaan awood u yeelanayno inaan kaqeybqaadano iskaashatada qadka tooska ah si aan ugu raaxeysanno xitaa waxbadan iyo waxa aan helno ayaa xaraashka keenaya iskuulkii hore ee ugu nadiifsanaa. Ma aanan arag wax xusid ah PvP, laakiin wax walba waxay umuuqdaan inay tilmaamayaan, sida Warhammer Online sanado ka hor, taas oo aan ku lahaan karno daqiiqado aad u fiican oo leh MMO oo loo maleynayo in lagu cusbooneysiin doono waxyaabo cusub.
Haddaan ka hadalno sawirada iyo dhanka farsamada, runta ayaa ah in shaqada la qabtay ay tahay mid laga masayro sidaa darteed xitaa heerarka hoose waxaan ku raaxeysan karnaa qaar ka mid ah xirfadihiisa iyo animations-ka si wanaagsan loo farsameeyay. Sida bay'adaha, magaalada, dekedda ama kuwa fasallada kala duwan ee si fiican loo qeexay ee ku siinaya khibrad ciyaareed oo weyn. Runtu waxay tahay inay dhadhan weyn nooga tagtay afkeena.
Hadda loogu talagalay kuwa loo bartay inay ku ciyaaraan shan daqiiqo dagaal toos ah iyo hawlgallo, waxay raadinayaan ciyaar aan haba yaraatee wax fiican lahayn. Marka taa laga reebo waxaan wajahaynaa MMORPG oo dalbanaysa inaan dilno cadaw badan oo aan howl badan qabanno in la simo; uma dheereyso sida ciyaaraha kale in daqiiqado gudahood aan horey u helnay heerka 10; daliil tan waa Bless Mobile. Halkan Warhammer Oddisey wuxuu ka heli doonaa dagaal u gaar ah oo gaar ah sababo la xiriira isbeddelada hadda socda ee cayaaraha badan ee khadka tooska ah.
Lo Waa runtaa waqtigii aan ciyaarnay waxaan la kulanay ciyaartoy badan Warhammer Odyssey , sidaa darteed bilowga gobolka, waxay umuuqataa in ciyaartoy badan lagu kordhin doono si tartiib tartiib ah. Haddii aad haysatid moobiil wanaagsan, waxaan kugula talineynaa inaad soo dejiso, maadaama ay yar tahay inaan heysano ikhtiyaar aan ku ciyaarno dugsi MMORPG-duug ah. Halkan waxaan ku leenahay mid ka mid ah waqtiyada wanaagsan.
MMORPG waxaan jecel nahay iskuulkii hore, aduunyo joogto ah, ciyaartoy badan, sawiro aad ufiican, dagaal gacan qabasho ah iyo saacado badan oo horyaala jawi aad u wanaagsan oo leh aaga Warhammer ee gacmaheena kujira.
Sawirro aad u fiican oo leh shaashad abuurista dabeecad la yaab leh
Waxaan seegnay inaan awoodno inaan gacanta ku dhigno dagaalyahankeenna oo aan is weerarinno
Deegaanada lagu abuuray koonkan Warhammer
Saamaynta sawirada iyo waxqabadka waa heer sare
Adduun joogto ah oo ciyaartoy badan leh
Waqtigaan la joogo kuma jiro Isbaanishka, laakiin waxay u imaan doontaa sida ay tahay beta
Developer: Gobalada Virtual
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Warhammer Odyssey waa 'dugsi jir ah' MMORPG oo aan lahayn dagaal toos ah oo muuqaal muuqaal ah
Waxaan u maleynayaa inaysan wali ku jirin Isbaanishka ... Ma jiraa war sheegaya in goor dhow la turjumi doono?
OnePlus Nord waxaa lagu cusbooneysiiyay OxygenOS 10.5.11 wuxuuna helaa balastarka amniga Janaayo
Star, nooca dadka waaweyn ee Disney +, oo hadda laga heli karo Spain